ညီလင်းသစ်: လူဆိုးနှင့်သူခိုး အရှုပ်တော်ပုံ
Posted by ညီလင်းသစ် au 7.7.11
၃ မိနစ် အချိန်ပေးပြီး အမှန်အမှား ပြန်စဉ်းစားခိုင်းတာ သဘောကျတယ်။ အဲဒါမျိုး ကလေးတွေတွင် မဟုတ်ဘူး လူကြီးတွေပါ လုပ်သင့်တာနော်။
အသက် ၆၀ ဆို တနာရီ ပြန်စဉ်းစားပေါ့။ တယ်ဟုတ်တာပဲ။ ကျမလဲ ထစ်ခနဲဆို စိတ်ဆိုးတတ်ပြီး စိတ်လိုက်မာန်ပါ သိပ်လုပ်တတ်တယ်။ နောက်ဆို အဲဒီလို အကျင့်လုပ်ပြီး စဉ်းစားမှပဲ။
ဒါနဲ့ ကိုညီလင်းသစ် ငယ်ငယ်ကရော စိတ်ဆိုးရင် ဘယ်လိုတွေ လုပ်ခဲ့ပါလိမ့် ... ။
ခလေးတွေကိုငယ်ငယ်ကတည်းက လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်သင်တာ သိပ်ကောင်းသလို မိဘကလည်း အခရာကျပါတယ်။
NLT, lovely family!!! I envy you. :D Impatient to see them.
Howalovely family....
"ခုံပေါ်မှာ နံရံကို မျက်နှာမူထိုင်...၊ ၃ မိနစ် မပြည့်မချင်း မထရ...၊ ဒီလို ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်စေသည့် ဒဏ်ပေးနည်းကို..,"
နန္ဒာ့ တူလေးကိုလဲ သူ့မိဘတွေ လုပ်လေ့ရှိတယ်။
"Naughty Space" လို့ ခေါ်တယ်။
အပြစ် လုပ်ခဲ့မိရင်၊ လူကြီးကို ကလန်ကဆန် လုပ်လာရင် ဒီ Naughty Space ကို ရင်ဆိုင်မယ်၊ သူ့ကို ပေးမယ့် အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးမယ် စတာတွေကို နားလည် သိစေဖို့ပေါ့လေ။
လူသားဆန်တတ်လာတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို နည်းလမ်းတကျနဲ့ လူသားဆန်ဆန် ဆက်စံတတ်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ ကလေးငယ်တွေရဲ့ အနာဂါတ်ဟာ ရွှေရောင်လွှမ်းနေစေပြီး လူကိုလူလို ရိုသေ လေးစားစွာဆက်စံတတ်လာမှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါဘူး။
သားငယ်ရဲ့ စူပုပ်ပုပ် မျက်နှာလေး မြင်ယောင်မိပြီး ပြုံးမိတယ်။ :))
ဖတ်လို့ကောင်းမယ့် စိတ်ပညာစာအုပ်တစ်အုပ်လောက် ရှိရင် ညွှန်းပေးပါလား ကိုညီလင်းသစ်၊ ကျွန်တော်လဲ အမြဲပဲ ကျွန်တော့် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရဲ့ဘောင်တံခါးကို သွားသွားခေါက်ချင်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ်။ ခုထိပဲ....ကျေးဇူးဗျ။
အခု ကိုညီလင်းသစ် စာကိုဖတ်တယ် ခုနက ကျားမေမေ ကို သွားဖတ်ထားတယ်
ကလေး လေးက ချစ်စရာ ကောင်းတယ်
ကလေးငယ်တစ်ယောက်အတွက် ကောင်းသောပြစ်ဒဏ်လေးပါ။ ဒီအရွယ်လေးတွေဟာ ဖယောင်းလို ပုံသွင်းရလွယ်တာမို့ မိဘအပေါ်မှာ ရာခိုင်းနှုန်းများများ မူတည်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ရာသက်ပန် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော မိသာစုလေးဖြစ်ပါစေကွယ်။
အကောင်ပေါက်လေး စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် ဖြစ်နေမယ့်ပုံလေးနဲ့ အဖေက သားကို ဆုံးမနေတဲ့ပုံလေး မြင်ချင်စမ်းပါဘိး)
ကြည်နူးစရာ ပို့စ်လေးပါပဲ ။
စိတ်ရှည်သားပဲ.. တကယ်တော့ မလွယ်ဘူးဗျ။ အဲဒီ့လိုအချိန်မှာ နည်းလမ်းမှန်မှန်နဲ့ ဆုံးမဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တော့ တွေ့နေပြီ။ Good Job!
ကလေးအရွယ် ဘာလုပ်လုပ် ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် စိတ်ဆိုးလိုက် စိတ်ကောက်လိုက် ပြန်ချော့လိုက် ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူဝေေ၀ အိမ်ရဲ့ဆည်းလည်းလေး အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေဗျို့
တကယ်တော့လည်း ကလေးတယောက်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ရတာ တယ်မလွယ်ပါဘူးဗျ
အပြင်စိတ်ကူးယဉ် ဘဝထက် လက်တွေ့ဆန်တဲ့ နွေးထွေးတဲ့ မိသားစုလေးအကြောင်း ဖတ်ရတာ ကြည်နူးချမ်းမြေ့စရာလေးပါလားအကို...သားလေးရဲ့ ဘဝက တော်ရုံကလေးငယ်တွေ မရတဲ့ နွေးထွေးတဲ့ မိသားစု ရဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေကြားမှာ ကြည်နူးချမ်းမြေ့ အတိပါလားအကို....
Lovely Family :)))
တချို့ ၆၀ ကျော်၊ ၇၀ တန်းတွေကတော့ ၁ နာရီ လောက် ထိုင်စဉ်းစားရုံနဲ့ အမှားတွေကို ပြန်မြင်ပါ့မလား မသိဘူး၊း) ကျနော်ငယ်ငယ်က စိတ်ဆိုးရင် ဘယ်လိုလုပ် သလဲ မမှတ်မိတော့ဘူးဗျ၊ အသက်က ကြီးလာတော့ မေ့တတ်လာပြီကိုး...။ ;-)
ဟုတ်ပါတယ်၊ ပြုလွယ်ပြင်လွယ်တဲ့ အချိန်မှာ လမ်းမှန် ကို သိသွားဖို့က အရေးကြီးပါတယ်..၊
Thanks..! You're gonna make it soon..! :)
ကြီးလာမှ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်က ကျဉ်ထားတဲ့ အပယ်ခံ နေရာမှာ မနေရဖို့ အခုငယ်တုန်းမှာ naughty space လို နေရာလေးတွေ လိုအပ်တယ် ထင်တာပါပဲဗျာ...၊ ပြန် လာလည်တာလည်း ကျေးဇူးပါနော်..၊
ကျနော့်မှာတော့ ပြင်သစ်စာအုပ် အချို့ပဲ ရှိပါတယ်၊ အခု အပြင်က ကွန်ပြူတာနဲ့ ရေးနေလို့ နာမည်တွေတော့ ခေါင်းထဲမှာ မရှိဘူးဗျ၊ စိတ်ဝင်စားရင် အိမ်ရောက်တဲ့အခါ ကျနော်ကြည့်ပေးမယ်လေ...၊
တခါတလေမှာ ဘာမှမပြောဘဲ ပြန်တာဟာလည်း ကောင်းတာပါပဲဗျာ၊ လာလည်တာကိုပဲ ကျနော်က ကျေးဇူး တင်နေပါပြီ...၊း)
အပြစ်ကို သိရုံသာသိပြီး စိတ်မှာ နာကျင်မှု မဖြစ်စေမယ့် ဒဏ်ပေးနည်းမျိုးကပဲ ကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊ ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါနော်...၊
နေဦးဗျ၊ နောက်တခါ သားကို မဆုံးမ,ခင် ဗီဒီယို ကင်မရာ ပြေးချိန်မှနဲ့ တူတယ်..ဟားဟား၊း) မပျက်မကွက် လာ,လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ ညီရေ..၊
တကယ်တမ်းမှာ မလွယ်တာ အမှန်ပဲဗျို့၊ သူနဲ့ အပြိုင် လိုက်စိတ်တိုနေရင် ဒေါသကြီးပြီး ရိုက်တာနှက်တာတွေ ပဲ ဖြစ်မှာ သေချာတယ်၊ ဆိုတော့ စိတ်ကို ကြိုးစားပြီး ဆွဲဆန့်ရတာပါပဲဗျာ...၊
ဝိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူဝေဝေဆိုတဲ့ စကားကိုတော့ သဘောကျ သွားပြီ၊ မိဘနဲ့ သားသမီးကြားက ဆက်ဆံရေးကို အမိအရ ဖော်နိုင်လို့....၊း)
ကလေးတိုင်းဟာ သူတို့ကို ဒီလောကထဲ ခေါ်လာခဲ့တဲ့ တာဝန်အရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ၂ ဦးရဲ့ နွေးထွေးဂရုစိုက်မှုကို ရသင့်တာ အမှန်ပါပဲဗျာ..၊
မိသားစုရဲ့ နွေးထွေး ကြင်နာတဲ့ အပြုအမူလေးတွေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နိုင်တဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ အရေးအသားလေးတွေ။ ဒါနဲ့ ကိုညီလင်း ဇနီးနဲ့ သားသားက မြန်မာလို နည်းနည်းပါးပါး တတ်လားဟင်။
Lovely post as usual on family life.In my case,i counted 1,2,3 for my 1st son as he was3year old.I counted my voice lengthen up to his manner.He must stand still in serious case cos he's afraid of mosquitoes in ygn that time.One of the welcome gifts of our home land to him.
အလိုပြစ်ပေးနည်း ကောင်းတယ်။ ဒီမှာတော့ မိဘအားလုံးက သားသမီးကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာ လေ့လာထားကြတယ်နော်၊ သူငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်။ သူ့အမေအရမ်းအရိုက်ဆိုးတာပဲ။ သူဆို သူ့အမေကို တုန်နေအောင်ကြောက်ရတယ်။
လည်း သဘောကျတယ်...။ဖေဖေ၊မေမေတို့ရဲ့ ဆုံးမပုံလေး
စိတ်မချမ်းသာဘူးဗျာ...။သူတို့ကို ဒီပို့စ်လေး ဖတ်စေချင်
ညီမ ဒါကိုဖတ်ပြီးပညာတော်တော်ရလိုက်တယ်။ ကျေးဇူးပါအစ်ကို။ အစ်ကို့ထိန်းကျောင်းမှူအောက်မှာဆိုရင် အစ်ကို့သားလေးဟာ မြန်မာသားကောင်း လေး ဖြစ်လာမှာပါ။
နွေးထွေးပြီး မေတ္တာတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ မိသားစုတစ်ခုရဲ ပုံရိပ်တွေကို ပိုစ့်လေးထဲမှာ တွေ့လိုက်ရတယ် ကြည်နူးပီတိတွေကုူးစက်သွားတယ် ကိုညီလင်းသစ်ရေ
ချစ်စရာမိသားစုလေးကို မျက်လုံးထဲ ကွက်ခနဲ မြင်သွားတယ်။ သားလေးရဲ့ ၇ှက်စနိုးဟန်နဲ့ ရယ်နေပုံလေးကို မြင်ရရင်ကောင်းမှာ.. နောက်တခါဆိုရင် ကင်မရာအနားမှာ ထားပါဗျို့ .. :P
စကားမစပ် အပေါ်က အရုပ်ကလေးနှစ်ရုပ်က သားလေးကစားတဲ့ အရုပ်ကလေးတွေလား။ သူတို့ကို ဒီအတိုင်းထောင်ထားပြီး ရိုက်ထားတာလား။ ဆေးတောင့်လေးတွေနဲ့ တူနေတယ်။ ပုံက ကြွနေလို့ စိတ်ဝင်စားလို့ တစ်ခေါက်ပြန်လာ စပ်စုသွားတယ်။ ;)
ကလေးကို ဆုံးမတဲ့နည်းလေးက ကောင်းလိုက်တာ။
ကိုယ့်သားသမီးကို လိမ်မာအောင် ဆုံးမရတာ အတော်ကို မလွယ်တဲ့အလုပ်ပါ ကိုညီလင်းသစ်ရေ။ အိမ်ကသမီးလည်း အဲဒီလိုပါဘဲ။ တစ်နေ့တစ်နေ့ သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ဂျာအေးသူ့အမေရိုက် နေရတာပါဘဲ။ ဒါတောင် သမီးက ရှစ်နှစ်ရှိနေပါပြီ။ ကိုညီလင်းသစ်သားလေးက ငယ်ပေမယ့် လိမ်မာပုံရပါတယ်.. ချစ်စရာလေး.. :)
မိသားစုပြသနာဖြေရှင်းပုံလေးကကြည်နူးစရာ... သားလေးက လိမ္မာတဲ့သားလေးဖြစ်မှာသေချာပါတယ်... မေတ္တာနဲ့ဆုံးမတတ်တဲ့မိဘတွေရဲ့သားသမီးတိုင်း လိမ္မာကြတာများပါတယ်...
း).. ကြည်နူးစရာလေး.. ကိုညီလင်းသစ်ရေ...
Really smart Dad!
၀ါးးးးးးးးးးးးးးး ကောင်းလိုက်တဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်နည်း (ကြိုက်တယ် ၊ သဘောကျတယ်)
မရွှေစင်ဦး ပြောသလို .. ကျားမေမေကိုလည်း ဖတ်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့်
ကိုယ်က လွတ်လပ်ခွင့်ကို မက်မောလွန်းသူမို့။
ဒီလို ညင်ညင်သာသာ ဆုံးမတာဟာ ကိုယ့်အတွက်ဆိုရင် ပိုထိရောက်မယ် ဟု ခံစားမိပါဂျောင်း။
ဇွန်က မိဘတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် ကလေးကို ဆုံးမပုံလေး မှတ်သားသွားတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ တူ၊တူမလေးတွေအပေါ် ပြန်အသုံးချလို့ ရအောင်ပေါ့။း) ကိုညီလင်းသစ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်း စိတ်ထားကောင်း၊ အမွေကောင်းတွေ စုဆောင်းရရှိတဲ့ သားလိမ္မာလေးဖြစ်ပါစေလို့ ဇွန်က ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ ပုံမှန်ဆိုရင် မအိမ်သူပြောတဲ့ နွားနို့အမျိုးအစားထဲကပါ။
သားကိုဆုံးမရင်၊ သားက စိတ်ဆိုးစရာတွေ လုပ်ရင် ကျွန်မစိတ်ဆိုးသွားတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ဒေါသကို မမြင်ရအောင် ကြိုးစားထိန်းပြီးမှ ဆုံးမရပါတယ်။
ခလေးဆိုတော့ တခါတလေ အမေဆိုးကြောင်းအဖေကိုတိုင်လိုက်၊ အဖေမကောင်းကြောင်း အမေ့ကိုတိုင်လိုက်လုပ်တာလည်း ရှိပါတယ်။
အဲလိုအချိန်ဆို ကျွန်မသိပ်ရီချင်တာပေါ့။ သူ့အပြစ်ပေါ့အောင် တရားခံရှာတတ်လို့ပါ။
ကျွန်မသားက ညီလင်းသစ်ရေ သူ့အဖေကို ပိုချစ်တယ်ရှင့်။
သားက မဖြစ်မနေ ပြောရမယ်ဆိုမှ ကြိုးစားပြီး ပြောတယ်၊ မဟုတ်လို့ကတော့ သိပ်မပြောချင်ဘူး၊ ဇနီးသည်လည်း ဒီအတိုင်းပါပဲဗျာ..၊း)
ကျနော်လည်း ၁,၂,၃ ရေတယ်ဗျ၊ အများအားဖြင့် အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ဂျီးဒေါ်သားတော့ ခြင်တွေကို အတော် ကြောက်သွားမှာပဲနော်..၊း)
ငယ်စဉ်တုန်းမှာ တခါတလေ နဲနဲပါးပါး ရိုက်တာကတော့ လိုအပ်မှာပါ၊ ဒါပေမယ့် တုန်နေအောင် ကြောက်သွားတဲ့ အထိ ရိုက်နှက်အပြစ်ပေး ခံရရင်တော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တခုခုမှာ ထိခိုက်နိုင်မယ် ထင်တာပါပဲ...၊
ကိုညိမ်းနိုင်က ဒီလို ကွန်မန့်တွေနဲ့ အားပေးလေလေ၊ ကျနော်လည်း ဆက်ပြီး အိပ်ရေးပျက်လေလေတော့ ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်ဗျာ..၊း)
လာလည်တဲ့ အတွက်ရော.. ကွန်မန့်လေး အတွက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမရေ...၊
ညီမပြောတဲ့ အတိုင်းဆို ကျနော်လည်း ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ် ပါပါရာဇီ ပြန်လုပ်ရတော့မယ် ထင်တယ်၊း) အရုပ်တွေက သားရဲ့အရုပ်တွေပါ၊ အသေးစိတ်ကိုတော့ ပို့စ်အသစ်ဖွင့်ပြီး ရှင်းပြထားတယ် နော်..၊း)
ဟုတ်တယ်ဗျာ၊ ကလေးကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့ နေရာမှာတော့ ကလေးဆုံးမနည်းလက်စွဲ အတိအကျ ဘယ်တော့မှ ပေါ်မယ် မထင်ဘူးဗျို့..၊း)
Sharon က မရိုစ့် ...
မေတ္တာတရားကပဲ အကောင်းဆုံး ထိန်းကျောင်း ပဲ့ပြင် သွားနိုင်တယ်လို့ ကျနော်လည်း ယုံကြည်တယ်ဗျ..၊
Well..not as smart as it looks like, I think, lol. Anyhow.. thanksalot!
ကျနော်လည်း ကျားမေမေ ပြောထားတာတွေမှာ သဘောမတူတာတွေ အတော်များတယ်ဗျ..၊း)
ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်နော်...၊
ဟာ..ဘယ့်နှယ် သင်ယူသွားပါတယ် တော့ မလုပ်လိုက် ပါနဲ့ဗျာ၊ ကျနော်တို့လည်း မြေစမ်းခရမ်းပျိုးမို့ ပေါက်လိုပဲ စိတ်တိုကြတာပါပဲဗျ...၊း)
ကလေးတွေကတော့ အဖေနဲ့အမေရဲ့ အကြား အားနည်းချက် လိုက်ရှာတဲ့ နေရာတော့ တပုံစံထဲ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်နော်၊ မ,ကောင်းမွန်တို့ မိသားစုလည်း ပျော်စရာကောင်းမှာ သေချာတယ်..။း)
သားသေးသေးလေးနဲ့ ဖြစ်တဲ့ အရေးအခင်းလေးကို မြင်ယောင်ရင်း ကိုယ်ပါ ရောပြီး ပျော်ရွှင်မိတယ်... ပြီးတော့ ဒီအတိုင်းဆို ကိုယ်လည်း မီးဖိုပေါ်က နွားနို့ပါပဲလားလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တွေးပြီး ရယ်ချင်သွားတယ်...
ရွာလည်နေလို့ စာကြွေးတွေ အခုမှ လာရှင်းရတယ် ကိုညီလင်းရေ... စိတ်မရှိပါနဲ့နော်...း))
ဖတ်ရတာ အရသာလေး တမျိုးပဲ။ တညိမ့်ညိမ့်ဖြစ်စေတယ်လို့ ပြောရမလား ၊ ကြည်နူးဖွယ်ရာ လို့ဆိုရမလားဘဲ။ ဖတ်ကောင်းတာတော့ အမှန်ပဲ။